दलान नेपाल : महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री विच दोहरी ?
महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री विच दोहरी ?
प्रधानमन्त्री - वार्तामा आउनुस । ठाकुर - मधेश वाट सेना फिर्ता गर्नुस अनि वार्ताको कुरा गर्नु होला । प्रधानमन्त्री - तोडफोड नहुने जिम्मा लिनुस, यही वाट सेना फिर्ताको लागी साथीहरु संग कुरा गछू ।
तमलोपाको पार्टी कार्यलयमा प्रधानमन्त्री कोइराला
१ महिना भन्दा वढी समय देखि मधेशमा आन्द्योलतरत मधेशी मोर्चाका एक शिर्ष नेता महन्थ ठाकुर काहा प्रधानमन्त्री सुशिल कोईराला मंगलवार विहानै वार्ता गर्न पुगे । तमलोपाको विजुलीवजार स्थित पार्टी कार्यलयमा विहानै प्रधानमन्त्री पुगेको पार्टीकै धेरै पदाधिकारीहरुलाई थाहा थिएन । मंगलवार तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर राजविराज जाने कार्यक्रम थियो । त्यही भएर उनी पार्टी कार्यलय आउने कुनै जानकारी थिएन । तर अचनाक मंगलवार विहानै पार्टी कार्यलयका कर्मचारीहरु खवर आयो अध्यक्षज्यू आउदै हुनुहुन्छ । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर मात्रै आएन सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी पनि पार्टी कार्यलय पुगे । केहि वेर मै सरकारी झण्डावाला गाडी विजुलीवजारको पुल मुनि तमलोपाको पार्टी कार्यलय निर ढयाक्क रोक्यो । विहानै भएकाले पार्टी कार्यलयमा खासै चहलपहल पनि थिएन । झण्डावला गाडी वाट प्रधानमन्त्री आफनो दुई जना सहयोगी नेताहरुको साथमा निस्कदै छेउमै रहेको चिया पसलका मानिसहरु पनि एक पार्टी कार्यलय तिर यसो हेर्न थाले । प्रधानमन्त्री कोइराला आफनो दुई जना नेताहरुको साथ ठाकुरको वैठक कक्ष दोस्रो तल्लामा गए । जाहा ठाकुर र त्रिपाठीले उनलाई स्वागत गरेका थिए । तमलोपा स्रोतका अनुसार हिजो अवेर राती मात्रै प्रधानमन्त्री कोईरालाले ठाकुरलाई फोन गरेर भोली म भेटन आउछू भनेका थिए । प्रतिजवाफमा ठाकुरले आफु विहानै १० वजे विराटनगरको फलाईट समात्ने एयरपोर्ट जानु पर्ने भएकाले उता वाट फर्के पछि भेटन भने । तर प्रधानमन्त्रीले होईन म एका विहानै तपाई जाहा भन्नु हुन्छ, त्यही आउछू भन्यो । ठाकुरले त्यस पछि ९ वजे सम्म पार्टी कार्यलय आउनुस आधा घण्टा भेटन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भने । प्रधानमन्त्रीले ८ ः३० नै भने किनकी १० वजे ठाकुरलाई हिडनु पर्ने थियो । त्यही भएर ठाकुर साढे ८ वजे पार्टी कार्यलय पुगेको थियो र प्रधानमन्त्री पनि पुग्दा ८ वजेर ४० मिनेट भईरहेको थियो ।
तमलोपा पार्टी कार्यलयमा पुग्दा प्रधानमन्त्री एकदमै तनावमा देखिएका थिए । तमलोपा स्रोत भन्छन, उनले ठाकुरको अगाडी पुरै नतमस्तक भएर एकहोरो रुपमा उनलाई हेरेको हेयौ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार कुराकानीको प्रसग ठाकुरले नै भन्नुस के छ भनेर सुरु गरेका थिए । त्यस पछि प्रधानमन्त्री कोईरालाले अत्यन्तै भावुक भएर ठाकुरलाई तपाइृ त एकदमै सुझवुझ भएको नेता, सवै कुरा थाहा छदै छन, मुलुक गम्भ्रि दुर्घटनामा फस्न लाग्यो । तपाईहरु वार्तामा आइ दिनु पर्यौ । हामी संविद्यान संशोधन गर्न पनि तयार छौ ।
प्रतिउत्तरमा ठाकुरले वार्ताको वातावरण तपाईहरु स्वयंमले विगारेको गुनासो गरे । ठाकुरले भने, वार्ता किन गर्नु पर्यो यो वाक्याशं तपाइहरुकै नेताहरु प्रयोग गरेकै हुन र हो पनि वार्ताको आवश्यकतै छैन कि । हामीहरु संग विगतमा जे सहमती भएको छ, त्यो संविदान संशोधन गरेर लागू गर्नुस अनि त हामी आफै आन्द्योलन रोकिहाल्छौ नि ।
त्यस पछि प्रधानमन्त्रीले विगतको कुरा छाडनुस भनेर भने, हिजो कले के भन्यो छोडनुस । वार्ता आउ र वसेर सबै कुराको छलफल गरौ ।
त्यस पछि ठाकुरले तपाईहरुले बस्ने वातावरण काहा दिएको र भनेर व्यंग गरेका थिए । ठाकुरले थप भनृ, हामी कहिल्यै पनि वार्तामा जान्नौ भनेका छैनौ । तर त्यसका लागी सरकारी पक्षको तयारी चाहियो । तपाईहरु मधेशमा सेना परिचालन गरीराख्ने, क्र्फुयै लगाई राख्ने अनि हामी टेवलमा गएर कसरी वार्ता गर्न सक्छौ । ठाकुरले मधेशमा अत्यद्यिक सुरक्षा वल प्रयोग भईरहेको भन्दै कोईरालाको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस पछि कोईरालाले वार्ताको लागी यदी सेना फिर्ता गर्नु भन्नु हुन्छ भने, म तपाईलाई मधेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन आग्रह गछू । स्रोत भन्छन त्यती वेला ठाकुर र कोईरालाको विचको दाहोरी वडो रोमान्चक देखिएका थिए । ठाकुरले शान्ति सुरक्षा आन्द्योलन भन्दा पहिला पनि समानइ रुपमा भईरहेको थियो र भोली पनि काुननको मान्यता अनुसार भईराख्ने भनेर जवाफ दिए । कोईरालाले स्थिीती अत्यन्तै नाजकु रहेको र जथाभावी तोडफोड तथा आगजनी भईरहे्को भन्दै सेना कसरी फिर्ता गरौ, साथीहरुले काहा मान्लान र भनेर भने । त्यस पछि ठाकुरले त्यसो पहिलो आफसमा एकमत हुन कोईरालालाई सुझाए र भने पहिला आफसमा एकमत भएर आउनुस अनि वार्तासार्ताको कुरा गरौला । त्यस पछि कोरालाले फेरी भने, मधेशमा तोडफोड तथा आगजनी नहुने जिम्मा यसो भए तपाईले लिनु पर्यौ त्यसो भए म यही वाट सेना फिर्ताको लागी साथीहरु संग कुरा गछू । फेरी साथीको कुरा गरे पछि तमलोपा अध्यक्ष सहअध्यक्ष त्रिपाठीले कोईरालालाई व्यंग गर्दै पहिला तपाई साथीहरु संग राम्ररी कुरा गरेर आउनुस त्यस पछि हामी वार्ताको वारेमा छलफल गरौला भनेर वैठक टुग्याइ दिए ।